Faritra Antananarivo - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Niavaka kely ny fivoriam-bavaka tetsy amin’ny fiangonana Apokalypsy Ambohimarina Itaosy ny Sabata 06 Jolay 2013 lasa teo. Io Sabata io no nanosorana ireo loholona vaovao izay hiandraikitra ny fiangonana manerana ny rezionaly Antananarivo. Araka izany dia nikatona avokoa ny fiangonana rehetra manodidina ny rezionalin’Antananarivo fa nifanome fotoana tetsy Ambohimarina avokoa ny vahoakan’Andriamanitra rehetra. Io fotoan-dehibe io rahateo, dia niarahana tamin’ny filoha maneran-tananin’ny Fiangonana Apokalypsy, dia ny pasitera Mailhol mivady.
Taorian’ny fiderana an’Andriamanitra sy ny rojom-bavaka maro samihafa, dia nandray vatsim-panahy tamin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra ny fiangonana. Izany dia araky ny perikopa izay iraisan’ny Fiangonana Apokalypsy maneran-tany, dia ny Eksodosy 34 : 8-16 ; ny Matio 13 : 1-9 sy 18-23 ary ny I Korintiana 10 : 23- 11 :1. Ny toriteny noentin’ny pasitera Mailhol tamin’io kosa dia notsongaina tao amin’ny Ezekiela 34: 8-16; izay manasongadina ny mpiandry ondry tsara sy ny mpiandry ondry ratsy. Ankoatra izay, dia nohamafisin’ny pasitera Mailhol fa efa manakaiky ny fotoana anatanterahan’i Jehovah ny teny izay efa nambarany ho amin’ity taona 2013 ity. Araka izany, dia nanavao ny fanekena tamin’Andriamanitra indray ny fiangonana tamin’io Sabata lehibe io.
Ny fotoana tapany hariva kosa dia nosokafana tamin’ny famoahana ireo mpiasa vaovao eo anivon’ny radio Fanambarana. Nisalotra ny anarana “Fandresena” ireo andiany ireo, izay nahitana mpanentana fandaharana, mpamokatra fandaharana, ary teknisiana. Ho mariky ny fahavitan’ny fiofanana izay narahan’izy ireo, dia nisy araka izany ny fizarana ny mari-pakasitrahana ary ny tale jeneralin’ny Radio Fanambarana no nitarika ny fotoana tamin’io. Marihina fa ny famohana ireto andiany Fandresena ireto, dia tafiditra ihany koa ao anatin’ny fanamarihana ny faherintaonan’ny zana-pandaharana “Fandresena Vao Maraina” izay arahintsika isa-maraina ao amin’ny Radio Fanambarana, manomboka amin’ny 07ora maraina ka hatramin’ny 09 ora maraina. Taorian’izay rehetra izay, dia notohizana tamin’ny fanosoroana ireo loholon’ny fiangonana vaovao ny fotoana, izay isan’ny ivon’ity fihaonam-be rezionalin’Antananarivo ity. Mialohan’ny fiafaran’ny fotoana kosa dia nisy ny vavaka manokana ho an’ireo mpianatra rehetra izay hanala fanadinana.